Google ဖုန်းအပြင် Android9Pie ကို ပထမဆုံးမြှင့်လို့ရခဲ့တဲ့ Essential ဖုန်း – DigitalTimes.com.mm
မနေ့ညကပဲ Google ကနေ Android OS ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Android9Pie ကိုထွက်ရှိလိုက်ပါပြီ။ ထွက်ရှိပြီးပြီးချင်း Update လုပ်လို့ရတာက Google ရဲ့ ဖုန်းတွေသာဖြစ်ပေမယ့် Google ဖုန်းမဟုတ်တဲ့နောက်ဟန်းဆက်တစ်လုံးမှာလည်း ဒီ OS Update အသစ်ကို မြှင့်လို့ရနေပါပြီ။ သူကတော့ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လတုန်းက Android7Nougat နဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Essential Phone ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Essential ရဲ့ဟန်းဆက်မှာ Android9Pie Update ကိုမြှင့်လိုရပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ Essential Handset ကိုင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
Android9Pie မြှင့်လို့ရနေပြီဆိုတဲ့သူတွေကတော့ Android9Pie က ပိုရိုးရှင်းထိရောက်တဲ့ User Interface, Gesture အနေနဲ့သုံးရမယ့် Navigation button တွေ၊ ပိုကောင်းလာတဲ့ Notification System အပြင် လုံခြုံရေးအတွက်မြှင့်ထားပြီး Notch တွေအတွက်လည်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းအကုန်ကျရင်တော့ Sony, HMD Global ရဲ့ Nokia ဖုန်းတွေ၊ OnePlus, Oppo နဲ့ Vivo တို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဖုန်းတွေက Android9Pie ကိုမြှင့်လို့ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း Google က ဆိုထားပါတယ်။ Samsung, LG နဲ့ တခြားစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ချို့ရဲ့ဖုန်းတွေကတော့ ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာ Update မြှင့်လိုရနိုင်တော့မှာပါ။ အဲဒီအချိန်တွေမတိုင်ခင်ထိတော့ Google ဖုန်းမဟုတ်တဲ့ Android Update အသစ်ကို ပထမဆုံးရတဲ့ Essential ဖုန်းအတွက် Congratulations! ပါလို့ ☺️☺
ဒီနပေဲ့ Google ကနေ Android OS ရဲ့နောကျဆုံးထှကျဗားရှငျးဖွဈတဲ့ Android9Pie ကိုထှကျရှိလိုကျပါပွီ။ ထှကျရှိပွီးပွီးခငျြး Update လုပျလို့ရတာက Google ရဲ့ ဖုနျးတှသောဖွဈပမေယျ့ Google ဖုနျးမဟုတျတဲ့နောကျဟနျးဆကျတဈလုံးမှာလညျး ဒီ OS Update အသဈကို မွှငျ့လို့ရနပေါပွီ။ သူကတော့ ၂၀၁၇ သွဂုတျလတုနျးက Android7Nougat နဲ့ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Essential Phone ပဲဖွဈပါတယျ။
Essential ရဲ့ဟနျးဆကျမှာ Android9Pie Update ကိုမွှငျ့လိုရပွီဖွဈကွောငျး တရားဝငျအတညျပွုလိုကျပွီဆိုတော့ Essential Handset ကိုငျထားတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ကံကောငျးတယျလို့ပွောရမှာပါ။
Android9Pie မွှငျ့လို့ရနပွေီဆိုတဲ့သူတှကေတော့ Android9Pie က ပိုရိုးရှငျးထိရောကျတဲ့ User Interface, ပိုကောငျးလာတဲ့ Notification System အပွငျ လုံခွုံရေးအတှကျမွှငျ့ထားပွီး Notch တှအေတှကျလညျး ပွောငျးလဲပွငျဆငျနိုငျအောငျ ထောကျပံ့ပေးထားတယျလို့ အတှအေ့ကွုံလေးတှကေို မြှဝထေားပါတယျ။
ဆောငျးတှငျးအကုနျကရြငျတော့ Sony, HMD Global ရဲ့ Nokia ဖုနျးတှေ၊ OnePlus, Oppo နဲ့ Vivo တို့ရဲ့ သကျဆိုငျရာဖုနျးတှကေ Android9Pie ကိုမွှငျ့လို့ရတော့မှာဖွဈကွောငျး Google က ဆိုထားပါတယျ။ Samsung, LG နဲ့ တခွားစမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတဈခြို့ရဲ့ဖုနျးတှကေတော့ ဒီနှဈကုနျလောကျမှာ Update မွှငျ့လိုရနိုငျတော့မှာပါ။ အဲဒီအခြိနျတှမေတိုငျခငျထိတော့ Google ဖုနျးမဟုတျတဲ့ Android Update အသဈကို ပထမဆုံးရတဲ့ Essential ဖုနျးအတှကျ Congratulations! ပါလို့ ☺️☺